आजको राशिफल : शनिबार कुन-कुन राशिका शुभ ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : शनिबार कुन-कुन राशिका शुभ ?
Khabar house | २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०१:१५ | Comments
काठमाडौं : वि.सं. २०७८ साल जेठ २२ गते शनिबार । इस्वी सन् २०२१ जुन ०५ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । जेठ कृष्णपक्ष । तिथि– दशमी, ०३ घडी ५३ पला, बिहान ०६ बजेर ४३ मिनेट उप्रान्त एकादशी । नक्षत्र–रेवती, ५१ घडी २५ पला, रातको ०१ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त अश्विनी । काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ०९ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५६ मिनेट । दिनमान ३३ घडी २४ पला । विश्व वातावरण दिवस ।
मेष राशि : पढाइलेखाइमा सुधार हुँदै जाने तथा अलि बढी मिहिनेत गर्दा पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र जित्न सकिनेछ । अग्रज तथा आफन्तहरूको सल्लाह बमोजिम अगाडि बढ्नुहोला, गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । औषधिजन्य तथा खाद्यान्न सँग सम्बन्धित सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दी आउनेछ । तर पनि बाहिरी वातावरण तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
बृष राशि : आफन्तजन तथा दाजुभाइबाट प्रशस्त सहयोग पाइनेछ । माया प्रे’ममा सा’मीप्यता बढेर जानेछ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ । परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रसन्न हुनेछ । विद्यामा तपार्ईंले गरेको मिहिनेत खेर जानेछैन ।
मिथुन राशि : तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइ वा लेखहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
कर्कट राशि : विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा अग्र स्थानमा तपार्ईंको नाम आउनेछ भने प्रविधिको प्रयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिने । भाग्य तथा समयले साथ दिने हुनाले गरेका काममा लाभ मिल्ने समय रहेको छ । माया प्रे’मको गाँ’ठो क’सिने छ भने जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिने समय छ । पै’त्रिक धन तथा सम्पत्ति हातलागी हुने योग छ ।
सिंह राशि : नयाँ कुराको खोज तथा अनुसन्धानमा समय बित्ने तथा भनेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । आकस्मिक धन तथा सम्पत्ति लाभ हुने समय रहेको छ भने नसोचेको सम्पत्ति हातलागी हुनेछ । स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउने भए पनि काम गर्न असहज हुन छैन । माया प्रे’ममा एकअर्कालाई बुझ्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ ।
कन्या राशि : पढाइले खाइमा मन जाने हुनाले उत्कृष्ट नतिजाका साथ पुरस्कार जित्न सकिने हुँदा आफन्त तथा गुरुजनहरू खुसी हुने छन् । प्रे’म तथा मित्रताको ब’न्धन कसिलो हुनुको साथै जीवन साथीको साथ रहने हुनाले काम गर्न ऊर्जा थपिनेछ । भौतिक तथा वि’लाशी वस्तु प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
तुला राशि : शत्रु तथा प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्ने भए पनि अन्ततः तपार्ईंको क्षमता देखेर आफै साइड लाग्नेछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी पुराना स’मस्या ठीक हुँदै जाने तथा काम गर्न सहज वातावरण बन्नेछ । पढाइलेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरूलार्ई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्ने समय छ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ । प्रे’म प्र’सङ्गमा एक अर्काबीच नजिक हुने तथा रमाउन सकिनेछ ।
बृश्चिक राशि : अध्ययनमा मन जानेछ भने सफल हुने सूत्र पत्ता लगाउन सकिने हुँदा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । औ’षधिजन्य तथा दैनिक उपभोग्य सामानको व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी धन तथा सम्पत्ति कमाउन सकिने छ । मायाप्रेमका कोपिला फक्रिएर जानेछन् भने नयाँ ठाउँबाट प्रे’म प्रस्ताव आउनेछ । आ’कस्मिक धन तथा सम्पत्ति हातलागी हुने योग छ । आस मारेको काम बन्नाले मन प्रसन्न हुनेछ ।
धनु राशि : प्रतिस्पर्धीहरू हार खानेछन् भने राजनीति तथा समाजसेवामा सम्मानजनक स्थान पाउने योग रहेकोछ। घर, जग्गा तथा सवारी साधनको खरिद बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिनेछ । आमा वा परिवारका सदस्यहरूको सहयोग पाइने हुँदा शरीरमा स्फुर्ती बढ्नेछ । माया प्रे’ममा एक अर्कालाई विश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने तपार्ईंको लोकप्रियता चुलिनेछ । पुराना झैझमेलाबाट मुक्त हुने समय रहेको छ ।
मकर राशि : न्यायिक निर्णय तथा कानुनी फै’सलाहरू तपार्ईंकै पक्षमा आउनेछन् । पढाइलेखाइमा मनजाने हुनाले अरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा सुरक्षित रहनेछ । भाग्यले साथ दिने हुनाले औषधिजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दी आउनेछ । दाजुभाइ तथा आफन्तसँगको स’म्बन्धमा सुमधुरता बढेर जानेछ भने माया प्रे’मको डो’रो क’सिलो भएर जानेछ ।
कुम्भ राशि : दमदार बोलीको प्रभावले नसोचेको काम हुने तथा सबैले तपार्ईंको तारिफ गर्ने छन् । न्यून श्रमबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिने समय रहेको छ । पढाइलेखाइमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने समय रहेको छ । प्रे’ममा सफलता प्राप्त हुने तथा नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न सकिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइ वा लेखहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
मीन राशि : पढाइलेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरूलार्ई किनारा लगाउँदै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिनेछ। माया प्रे’ममा सा’मीप्यता बढेर जानेछ भने घरपरिवार तथा आफन्तबीचको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । सुन्दर तथा विलाशी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । तपाईंको दिन शुभ रहोस् । युवा ज्योतिषी डीपी भण्डारी ज्योतिष परामर्ष सेवा केन्द्र ।